Prof Cabdi Ismaaciil Samater oo Farmaajo ugu baaqay in Guddi Madax-bannaan uu ku wareejiyo Doorashada Dalka. - Awdinle Online
Prof Cabdi Ismaaciil Samater oo Farmaajo ugu baaqay in Guddi Madax-bannaan uu ku wareejiyo Doorashada Dalka.
Aqoonyahan Cabdi Ismaaciil Samater oo la hadlay BBC-da oo ka hadlay ismarin-waaga siyaasadeed ee Madaxda Federaalka, Dowlad-Goboleedyada & Gobolka Banaadir ayaa sheegay in xalka uu muuqdo haddii la damacsan yahay in wax laga qabto.
Prof Cabdi ayaa sheegay in aysan dhicin “Doorasho qof tartamaya uu maamulaya” Meel adduunka lagu arkay aysan jirin, balse ay dhacdo in loo dhiibo Guddi madax bannaan oo u dhaxeeya dhammaan dhinacyada loolamaya.
“Ma dhicin Doorasho qof tartamaya uu maamulaya, waa in guddi madax-bannaan loo dhiibaa si loo wada sinnaado, Haddii uu qofka tartamaya waa in uu gaar uga baxaa loona dhiibaa Guddi lagu kalsoonaan karo, waa in saddexda qodob ee kala ah arrinta Gobolka Gedo, Guddiga Gobollada Waqooy (Somaliland) & xubnaha Guddiga in laga saaro Ciidanka” Sidaasi waxaa yiri Prof Cabdi Ismaaciil Samater.
Shirarka looga hadlaya arrimaha Doorashooyinka ayaa aad u kordhay, aqoonyahannada qaar ayaa ku doodaya in sida loo kulmaya aan looga wada-xaajoon qaabka looga gudbi kara caqabadaha taagan.
Next articleAkhriso:- Shirkii Afisiyoono oo dib u dhacay & sababta ka dambeeysa